Ukurhoxiswa kweCampers abavelisi, abaXhasi - China Ukurhoxiswa kweCompact Factory
Ukurhoxiswa uqinisa J-hook uhlobo
Ubambiso lokumiswa luyilelwe ukufakelwa kunye nokumiswa kweentambo ezine ze-LV-ABC ezingundoqo ezixhasa iipali okanye iindonga. • Uqinisa lwenziwe ngesinyithi esishushu sentsimbi kunye nezinto ezinganyangekiyo kwimozulu. • Ifakwe i-shear head bolt. Ubambo lunokufakwa ngokulula ngaphandle kokonakalisa ukufakwa kwentambo • Akukho zixhobo zikhululekileyo: Umgangatho: EN 50483-2 Ikhathalogu No. Umqhubi ofanelekileyo iJSC-1 4 × 16 ~ 35mm2 JSC-2 4 × 50 ~ 120mm2 JSC-3 4 × 50 ~ 70mm2 ...
ukurhoxiswa yamasango for ABC cable
I-XJG uthotho ilungele ukuhanjiswa kwe-waya yombane, inika uhlobo lwe-Hook, uhlobo lwehenjisi kunye nohlobo lokuthumela ngaphandle kubasebenzisi.
I-NYLON-suspension-clamp ye-ABC intambo
1A 1B ukunqunyanyiswa uqinisa ziyilelwe ukunqumamisa self-ukuxhasa LV-ABC intambo kwizibonda kunye umthunywa ngci. Sikhokela umvelisi wohlobo lwe-NFC yokuNqunyanyiswa kombane kunye nenkqubo yokuvelisa kukubumba ngenaliti, izinto ezisetyenzisiweyo yi-UV Resistant Glass Egcwalise iNylon, eziluncedo kwimveliso enokuthi ngenxa yokuba yenziwe ngeplastikhi igqunyiwe ngokupheleleyo kwaye ayinazo naziphi na iindawo ezikhululekileyo. , Ikhebula linokubanjwa ngokuhlengahlengisa uhlobo lwe-lever. Yazisa ...
XGU uhlobo trunnion uhlobo oluthambileyo intsimbi ukunqunyanyiswa uqinisa / ipleyiti yombane uqinisa ubukhulu becala esetyenziselwa ezihamba umgca yombane, ukunqumama umqhubi kwi yokwambathisa okanye umbane umqhubi kwi kwinqaba isibane ngokuxhuma izixhobo. Yenziwe ngealuminiyam yealuminium, kunye nelahleko encinci ye-magnetic hysteresis kunye ne-eddy yangoku kunye nobunzima bokukhanya kunye nofakelo olufanelekileyo. Ifikelele kwiikhrayitheriya zokonga umbane kunye nokuncitshiswa kokusetyenziswa kolwakhiwo ngokutsha lwegridi yelizwe laseTshayina. Nini ...
Indawo yokuxhoma ephindwe kabini yokujija ukujija okuphambeneyo Umzimba wenkampu kunye nabagcini benziwe ngealuminium alloyIzikhonkwane zeCotter zenziwe ngentsimbi engenasici, amanye amacandelo ashushu. (1) I-Angle ejikelezayo ye-clamp yokumisa ayikho ngaphantsi kwe-25 °. (2) Irediyasi yokujika kwegophe kwikliphu yocingo ejiyileyo ayiyi kuba ngaphantsi kwamaxesha asibhozo kububanzi becingo olufakiweyo. (3) Amandla okubamba iklip yocingo lokumisa kwiingcingo ezahlukeneyo kunye nepesenti yeeteksi ...
Ukurhoxiswa uqinisa type uhlobo ibhegi, ikliphu wire ukunqunyanyiswa ubukhulu becala esetyenziselwa ezihamba imigca amandla okanye izikhululo. Umbane ohambisa umbane unqunyanyisiwe kumtya we-insulator okanye umbane ophethe umbane unqunyanyisiwe kwinqaba yesixokelelwano ngokudibanisa iintsimbi.Izinto ezimbini ezenziwe ngezinto zentsimbi kunye nealuminium ingxubevange. ungabi ngaphantsi kwama-25, kwaye irediyasi yokugobeka ayiyi kuba ngaphantsi kwamatyeli asibhozo ebubanzi be-inst ...
Ukurhoxiswa uqinisa type Uhlobo lwe-Envolope） XGH uthotho lokumiswa kwamasango kusetyenziswa ukudibanisa abaqhubi kwi-insulators. Umzimba weClamp kunye nabagcini benziwe ngealuminium alloyIzikhonkwane zeCotter zenziwe ngentsimbi engenasici, amanye amalungu ashushu edipha. Ikhathalogu eyi-Conductor Dia efanelekileyo.） Mm, ubukhulu obukhulu (mm) Umthwalo osilelayo ochaziweyo (kN) Ubunzima (kg) HCMRL XGHICGH) -2 5.1-12.5 52.5 25 16 18.0 166 40 1.0 XGHICGH) -3 12.4-17 50 .. .